तरुण दल निर्वाचनमा दुबै क्षेत्रमा शेर्पा विजयी - Awajonline Online Newspaper
तरुण दल निर्वाचनमा दुबै क्षेत्रमा शेर्पा विजयी
दोलखा, ६ भदौं/नेपाल तरुण दल दोलखाको क्षेत्रीय अधिवेसन आज सम्पन्न भएको छ । आज भएको निर्वाचनमा क्षेत्र नं. १ वाट कामसर्की शेर्पा र क्षेत्र नं. २ मा ङावा शेर्पा अध्यक्षमा विजयी भएका छन् । विजयी भएका कामसर्की शेर्पाले ६० र ङावा शेर्पाले ८३ मत पाएका थिए । अन्य सबै पदमा हिजो नैे सर्वसम्मत भएकाे थियाे ।
क्षेत्रीय अध्यक्षमा २ क्षेत्रमा गरी ८ जनाको उम्मेद्वारी परेको थियो । अध्यक्षका लागि क्षेत्र नं १ मा उमेश योगी, कामसर्की शेर्पा, धनबहादुर योञ्जन, विजय खड्का र विशाल कार्कीले उम्मेदवारी दिएका थिए । त्यस्तै क्षेत्र नं २ मा पदमराज पाठक, ङावा शेर्पा र भीम बहादुर लामा चुनावी प्रतिस्पर्धामा थिए ।
हिजो निर्विरोध निर्वाचित हुने उम्मेद्वारहरुमा क्षेत्र नम्बर १ बाट केन्द्रीय प्रतिनिधि चन्द्रगणेश काफ्ले र २ बाट तिलक थापा र पदाधिकारीहरु तर्फ क्षेत्र नं १ को क्षेत्रीय उपाध्यक्षमा सुन्दर कार्की सचिब राजकुमार खड्का कोषध्यक्षमा बिनोद कटुवाल र सदस्यमा इन्द्रबहादुर खड्का निर्विरोध भएका हुन् ।
क्षेत्र नं २ तर्फ उपाध्यक्षमा फुर्वा शेर्पा, सचिबमा अबतारसिंह लामा, कोषाध्यक्षमा सुकदेब शिवाकोटी र सदस्यमा तिलक चौलागाँई रहेको निर्वाचन समितिले जनाएको छ ।